Fampielezan-kevitra – Kandidà Rajoelina: « Hanova ny tantara isika amin’ny 7 novambra » | NewsMada
Fampielezan-kevitra – Kandidà Rajoelina: « Hanova ny tantara isika amin’ny 7 novambra »
Nihazo ny tany Ranomafana sy Ambatofinandrahana ary Ambohimahasoa ka hatrany Ihosy sy Isandra indray ny kandidà Rajoelina, omaly. Nihaino ny olana sy ny hetaheta ary ny fanirian’ny vahoaka hatrany ny tenany ary nampanantena fa tsy maintsy tanterahina ny ambara rehetra.
“Hanova ny tantaran’ny firenena isika matoa aho tonga eto. Anisan’ny firenena mahantra indrindra isika. Hovaintsika amin’ny 7 novambra ka filoha tanora indrindra ny hitantana ny firenena. Mila tanora manana vina, tia tanindrazana isika”, hoy izy. Nampanantena ny tenany fa hahena ny vidin-jiro amin’ny alalan’ny Namorona II ka hahazo izany koa ny any Ifanadiana, ankoatra ny eo Ranomafana. Hatsangana ny foibe fanofanana tanora ho matihanina ahafahan’izy ireo miasa. Eo koa ny fanorenana EPP manaraka fenitra, tahaka ny efa nambarany amin’ireo faritra notsidihiny. “Ho anareo tanora manana tetikasa, hisy famatsiam-bola, tsy misy zanabola. Betsaka ny tetikasa hataontsika hampandrosoana ny firenena. Mijanona eto ny hetra ary hamoronana asa ho an’ny tanora fa tsy halefa any Antananarivo”, hoy ihany ny kandidà laharana faha-13.
Hividy helikoptera 10 hiadiana amin’ny dahalo
Momba ny tsy fandriampahalemana, nohitsiny fa hofongorina hatraminy farany ny dahalo. Nahavidy angindimby telo isika fony fitondrana Tetezamita, na tsy nisy famatsiam-bola. Hividy helikoptera 10 isika raha vao lany Rajoelina. Hisy koa ny hery vonjitaitra haorina eto Ambatofinandrahana. Homena fitaovana manara-penitra, toy ny fiara 4×4 sy “drone”. Esorina avy hatrany raha misy tompon’andraikitra miray tsikombakomba, na tsy mahavita miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ho hita avy hatrany koa ireo omby rehefa hametahana “puce tracée par satellite”. Gadraina amin’ny fonja manokana ireo dahalo”, hoy ihany izy. “ Ho filoha mendrika ny Malagasy ny tenany. Mitsinjo ny besinimaro aho”, hoy ny mpanorina ny IEM.
Tokony ho mailo amin’ny andron’ny fifidianana
Nanteriny fa tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Tsy maintsy mandresy ny laharana faha-13. Momba ny fifidianana kosa, natsidiny fa tokony hitandrina amin’ireo miketrika ny hangala-bato sahady. “Aza misy miala raha tsy vita ny fanisam-bato. Homena finday ny tompon’andraikitra rehetra isaky ny birao fandataham-bato ka halefa any Antananarivo avy hatrany ny voka-pifidianana”, hoy izy.